Todobadii (7) daqiiqo Ee Baarlamaanka, iyo Todobadii(7) daqiiqo ee Banaanka iyo Todobo (7) qodob oo iiga Baxay.
November 20, 2020 Sahuur Yuusuf 2
Winston Churchill, Ra’iisal wasaarihii Midigta fog ahaa, ee labada xili noqday wasiirka koowaad ee UK, ahaana ninkii hogaaminayey dalkiisa dagaalkii 2aad, ayaa markii dagaalku dhamaaday 1945, looga adkaaday xilkii, waxaana u reebay odhaahdan caanka noqotay.
“Guushu ma ahan kama-dambaysta, guuldaradu ( fursad la lumiyo) ma aha mid dhimasho keeni karta-waa geesinimada in la sii wado waana taas waxa la tirinayaa.-“
Winston Churchill, oo ahaa Qoraa iyo siyaasi leh aragtiyo badan ayaa markale tartan ugalay xilkii looga guulaystay ee Ra’iisal waaaaraha, waxaana doorashadii dhacday 1951 loo dooraty xafiiska.
Churchil hadalkiisa waxaan usoo qaatay inaad ila fahanto dulucda mowduuca aan faalaynayo iyo Qofka ay khusayso, dabcan sawirka gidaarka yaala iyo cinwaanka 3da 7aad ah isla xidhiidhisay, balse aan hoos u yaro dego ee adna iisoo raac ilaa dhamaadka.
Luulyo, 25, maalin si caadi ah baarlamaanku u furmay kadib balan hore oo xil ka raaridid ah oo aan oolin, ayaa Mudanayaal Baarlamaan si boobsiis xukuumadii Soomaaliya xilka uga qaadeen – habka loo maray sharci ahaantiisa su’aal baa weli ka taagan- hase ahaate qadar 7daqiiqo ah ayaa Codsiga iyo cod qaadista lagu dhameeyey.
Ra’iisal wasaarihii xukumadaas ee Xasan Cali Kheyre, oo habeenkii hadlay waxaa uu sheegay in uu iscasilay dalkana u tudhayo, khilaaf iyo isjiid-jiidna uusan horseedayn.
Xasan waxaa laga raacay han hoose oo isaga iyo saaxibadiisa hogaanka wadajoogay ku huursanaa, walow aan kor loo odhan hadana goloyaasha shaaha lagu faaqidayey.
Laba goor oo uu shir gudoomiyey xukumadiisa, ayuu xasan si cad uga hadlay Doorasha waqtigeeda kudhacda hufan oo wadar ogol ah, hadalkaas oo Mucaaridka Naseexo u ahaa, jaalkiisa ay kala irdhoobayna Nabar ku ahaa ayaa “Hamigii xasan Banaanka keenay, Barqana Baarlamaanku ku buriyey”
Tan iyo maalinkaas Xasan maqal iyo muuqaal lagama hayn, marka laga reebo shaacinta doonistiisa xilka madaxtinimo ee dalka oo barahiisa bulshada ku baahiyey, dhowr cisho kadibna uu dalka ka baxay, socdaalo uu kutegay dalka dibadiisa iyo kulama oo galayba lagama war iyo wacaal waxaan sawir ahayn.
Noofember, 20, saaka ayuu dalka kusoo noqday, soo dhawayn uusan mudan intuu xilka joogayna waa lagu maamusay, gaardi iyo galbis gurigiisa lagu geeyey ayuu hadlay, markan waa 7daqiiqo hadalkiisu, oo aan 7 (todobadan) qodob ka tilmamay.
1. Sharciga iyo sarayntiisa ayaa saldhig u ahayd hadal jeedinta Xasan kheyre, waxaa uu ku adkaysatay in wixii lagu heshiyo ay tahay in la fuliyo (Doorasho 4sanno).
2. Xasan kheyre waa hogaanka Mucaaridka ee ay wajahayso NN ee wakhtigan, waxaa uu ku qalabaysan yahay hadal jeedin kasbasho leh, dhihid dhiiranaan leh, garnaqsasho gaabsi leh, edeb asturnaan leh, xifaaltan xurmo leh, iyo tan ugu muhiimsan oo ah ilaalinta sirta qaran ee uu kasoo shaqeeyey, kuma dhaliilin saaxibadiis ay wadashaqeeyey howlihii qaran ee qabyada kawada noqday.
3. Xasan kheyre intii uu hadlayey dhagaha dadka waa ka dhowray xanaf iyo dib unoqosho, “waxaan aaminsanahay dalkeenu inuu ku horomari doono muddo kooban” waa rajo abuur iyo yidiidilo, waana sumadda uu kaga duwan yahay saaxiibadiis safka mucaaridka jooga ee Qoriga iyo Qaxa ku hal qabsada.
4. Kheyre waxaa uu soomaalida dareensiiyey inuu kusocdo jidkii Soomali-weyn, “Safarkayga waxaan ka bilaabay Djabouti waxaana isoo dhaweeyey Madaxweyne Ismaaciil”, hadii aad hadalka macnayso Jabuuti waa qayb inaga mid ah ninkii duudsiyaana shacabku waa ka digtoonaan doonaan.
5. Adeegii uu usoo shaqeeyey qaranka ayuu muujiyey inuu ka dhaxlay khibrad, waxaa uu cadeeyey inuu Amaano iyo adeeg uu balan qaadayo, soomaaliduna hore ugu baratay inuusan ahayn nin qoys iyo mid musuq oo hamuun qaba.
6. Xasan kheyre, waxaa uu lahadlayey shacabka, laba jeer ayuu si balaadhan ugu mahad celiyey, waxayna ahayd fariin ah dadka idinkaa leh, ha yeelina koox keliya (Baarlaamaan) inuu mustaqbalka idin hor joogo.
7. Xasan kheyre waxaa uu ka digay qalalaase, waxaa uu sheevay sharcigoo la diido inay deganaan la’aan keento waxaana uu u muuqday nin dabaqaya “Deriska mar ku dayo, marna kadarnow”
Gebagadadii xasan kheyre shacabka soomaali waxaa uu tusay in uu yahay wiil aan waqtigu bedelin, waxaa uu cadeeyey inuusan xildoon xooldoon ah iyo inuu yahay xaldoon aan xaaja moog ahayn.
W/Qoray: Cabdiqani Abokor
Salfududaa somalidu xasan hargidir iyo
Abgaal buusan dhafikarin intaa jaale
Darood lagaarin calafkuna waa dhanka
Allaah oo hadii illahay uqoray inuu
Hogamiyo somalida maanta waa arinkale
Inkasta oo aan jaclaysan abaalkii
Iyo fankii farmajo uu nofaniyay
Uu hoos ugadhacay .we ll see
Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, Jan qoraaalka Qorey DUF KUBAX… Churchill WAXUU ahaa gaalkacyo ingiriis ah waxa aad ka hadleyso waa siyaasad soomaliyed oo qabiil ku dhisan. Kheyre waa basaas u shaqeeya wadamo shisheeye